इलामको मरब क्याम्पसबारे सुनिएका, देखिएका पछिल्ला घटनाक्रमहरु अशोभनिय - Nayabulanda.com
इलाम क्याम्पसको छवि सुधार : डा. खगेन्द्रनाथ शर्मा, संस्थागत प्राचार्य- इलाम क्याम्पस
नयाँ बुलन्द १९ माघ २०७६, आईतवार २१:५९ 238 पटक हेरिएको
इलाम क्याम्पसबारे सुनिएका, देखिएका पछिल्ला घटनाक्रमहरु पटक्कै शोभनिय छैनन् । पहिलो कुरा, शैक्षिक एवं प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीति गर्नु हुँदैन । दोस्रो, शिक्षा शान्ति क्षेत्र हुनुपर्छ ।
अहिले जे सुनिएको छ, त्यसरी संस्थालाई अघि बढ्न दिनुहुन्न । पूर्वाग्रह रहितका शिक्षाप्रेमीहरुको पहलमा यो विवादलाई समाधान गरी स्थायी रुपमा अघि बढ्ने प्रण र प्रतिज्ञा सृजना गर्न आवश्यक छ ।
यसमा केही निष्पक्ष अग्रजहरु एवं क्षमतावान युवा समूह पनि सामेल हुनुपर्छ ।
मेची अञ्चलमा सबैभन्दा पहिला खुलेको इलाम क्याम्पसले प्रारम्भिक कालदेखि शिक्षाको राम्रो जग बसाउँदै विगतमा त्रिभुवन विश्वबिद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रुपमा पनि प्रथम भएर स्वायत्तता प्राप्त गरी हामी सबैको गौरब बढाएको तथ्य हामीले भुल्नु हुँदैन ।
त्यसमा आँच आउने कुनै पनि व्यवहार निन्दनीय नै हुन्छन । यस शिलशिलामा विवादपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप क्याम्पसको छवि धमिल्याउने कुरा हो । क्याम्पस प्रमुखलाई बल पुग्ने कुरामा जोड दिइनु पर्छ । क्याम्पस प्रमुखले पनि कुनै पूर्वाग्रह नराखी निर्भिक भएर कार्य सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ ।
शुरुवातदेखि नै इलाम कलेजले पूरै जिल्लाको छवि र प्रतिष्ठा बढाउने काम गर्दै आएको हो । यसका उत्पादनहरुले राष्ट्रिय राजनीति र प्रशासनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको इतिहास ताजै छ । त्यसैले पनि प्रत्येक जिम्मेवार व्यक्तिले यो क्याम्पसको छविलाई अघि बढाउन प्रतिज्ञारत हुनुपर्छ ।
हुन त नेपालमा ०४६ सालको परिवर्तनसँगै हरेक क्षेत्रमा राजनीति हावी हुँदै आएको कसैबाट छिपेको छैन । यसै शिलशिलामा शैक्षिक एवं प्राज्ञिक क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन । यो नै ठूलो दूर्भाग्य हो । अहिले पनि म के कुरामा जोड दिन्छु भने शैक्षिक एवं प्राज्ञिक क्षेत्र स्वतन्त्र हुनुपर्छ, यसमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन । इलाम क्याम्पसको पछिल्लो दुर्दशा यहि राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम हो ।
अहिले पनि क्याम्पसलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान प्रसस्त संभावनाहरु छन । मुख्य रुपले राजनीतिक क्षेत्रले अ—हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट समाजलाई दुरगामी प्रभाव पार्न सकिने कुरा दल र तिनका नेताहरुले बुझ्न जरुरी छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने इलाम कै नेताहरु किन नहुन उनीहरुले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई यो सन्देश दिन जरुरी छ ।
यसको पहिलो सर्त भने कै राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य हो ।
स्वच्छ र स्वतन्त्र वातावरण नभएसम्म क्याम्पस अघि बढ्न सक्दैन । यसमा क्याम्पसमा रहेका विद्यमान विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीका युनियनहरुले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्न जरुरी छ ।
यसकासाथै शिक्षापे्रमी एवं नागरिक समाजमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको योगदान पनि उत्तिकै अपेक्षाकृत हुन्छ । यस कार्यमा त संचालक समितिको सकारात्मक भूमिका अझ अनिवार्य हुन्छ नै ।अन्तु न्युज बाट साभार
महिला माथि शोषण किन ?
सांस्कृतिक अतिक्रमण विरुद्ध